Total, Chevron, POSCO: stop supporting the bloodbath in Myanmar <br><br> တိုတယ် (Total)၊ ရှယ်ဗရွန် (Chevron)၊ ပေါ်စကို (POSCO) ကုမ္ပဏီများမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သွေးချောင်းစီးအောင် ထောက်ပံ့နေမှု ချက်ချင်းရပ်
CEOs and executives of Total, Chevron, POSCO, and all oil and gas companies operating in Myanmar
Total, Chevron, POSCO: stop supporting the bloodbath in Myanmar
တိုတယ် (Total)၊ ရှယ်ဗရွန် (Chevron)၊ ပေါ်စကို (POSCO) ကုမ္ပဏီများမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သွေးချောင်းစီးအောင် ထောက်ပံ့နေမှု ချက်ချင်းရပ်
44 signatures until 150k
Myanmar's military has stagedacoup and is murdering hundreds of peaceful protesters, including children -- and they're doing it with billions in support from oil and gas companies like Total and Chevron.
Oil and gas is the junta's top funder. So while the US, UK, and others place sanctions on the military, these ruthless Generals will be unfazed as long as they have the support of energy giants.
Activists in Myanmar are urgently calling on the companies to end their support to the military -- let's show that people all across the globe are backing them up.
မြန်မာစစ်တပ်သည် အာဏာသိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက် ကလေးများအပါအဝင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေသူ ရာပေါင်းများစွာကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းသို့လုပ်ဆောင်မှုကို ရေနံနှင့် သဘာ၀ဓာတ်ငွေ့ ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် တိုတယ် (Total) နှင့် ရှယ်ဗရွန် (Chevron) ကုမ္ပဏီတို့မှ ရရှိသည့် ဝင်ငွေ ဒေါ်လာဘီလျံများစွာဖြင့် လုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရေနံနှင့် သဘာ၀ ဓာတ်ငွေ့မှ ဝင်ငွေသည် အာဏာရှင်ကို အဓိက ထောက်ပံ့နေသည့်ငွေကြေး ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်၊ ယူကေနှင့် အခြားနိုင်ငံ များမှ မည်သို့ပင် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့နေစေကာမှု စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီကြီးများထံမှ ထောက်ပံ့မှု ရနေသ၍ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော ဗိုလ်ချုပ်များ တုန်လှုပ်ချောက်ချားမည် မဟုတ်ပေ။
မြန်မာ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများက အဆိုပါကုမ္ပဏီများမှ စစ်တပ်သို့ ထောက်ပံ့နေမှုများကို ရပ်တန့်ရန် အရေးတကြီး တောင်းဆိုလိုက်သည်။ - ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးမှ ပြည်သူများကလည်း မြန်မာပြည်သူများနှင့် အတူတကွရပ်တည်၍ အားပေးထောက်ခံနေသည်ကို ပြသကြပါစို့…၊
Justice For Myanmar. 8 February 2021.
Washington Post.4March 2021.
Guardian. 1 March 2021.
TO: CEOs and executives of Total, Chevron, POSCO, and all oil and gas companies operating in Myanmar
Suspend payments to Myanmar's junta until peace and democracy are restored.
Before you sign "Total"
Thanks for adding your name to "Total"